Sokajy: Train Travel UK
an-trano > Train Travel UK
Fotoana famakiana: 6 minitra Raha afaka miteny ny vato tempoly fahiny, Niresaka momba ny sivilizasiona fahiny izy ireo, fanafihana, kolontsaina, ary fitiavana. ny 12 Ny ankamaroan'ny Tempoly Fahiny Maneran-tany dia voatahiry tsara sy mahatalanjona amin'ny hatsarana sy ny sarivongana. Avy amin'ny tempolin'i Farao any Ejipta ka hatramin'ny tempolin'ny Bodista sy Hindoa any Azia Atsimo-Atsinanana, ireo…
Train Travel Gresy, Fiaran-dalamby any Skotlandia, Train Travel UK, Travel Europe
ny Nikki Gabriel
Fotoana famakiana: 6 minitra Ny UK. Ny renivohitra dia mitondra fahafinaretana betsaka ho an'ny mpandeha sy ny mponina. Avy any Big Ben sy London Eye ka hatrany Westminster Abbey sy Buckingham Palace – be dia be ny toerana hotsidihina any Londres. Eo koa ny maritrano mazava, fiainana alina mamirifiry, ary mahafinaritra…
Fiaran-dalamby Britain, Train Travel UK, Travel Europe